Warshadaha Photovoltaics, Ac Isolator, Dc Fuse Holder - FEIMAI
Tayada heerka koowaad si aad uhesho sumcad heer sare ah
Waxaa la aasaasay 2003, Feimai Electric Co., LTD waxay ku taalaa caasimada korantada ee Shiinaha- xinguang Industrial Zone, Liushi, Yueqing, Zhejiang, China. Awoodda farsamada sare iyo qalabka baaritaanka wax soo saarka, shirkadeena waa soo saare baaxad weyn oo soo saare ah dhamaan noocyada qalabka korontada, waxaanan leenahay sannado badan oo waayo aragnimo ah bixinta qalabka korontada Sida daboolaya aag of 2000 mitir murabac ah, aagga wax soo saarka our waa in ka badan 8000 mitir oo laba jibbaaran. . .
Waxaan ku siinaa xalal codsi oo ku saleysan tikniyoolajiyadda laser Xulo warshadahaaga. xalalka ugu fiican ee kugu habboon adiga
DC go'doomin Switch PM1 Taxanaha
ADDB7-63 / PV Qalabka Wareegtada Mini
Dabka Nidaamka Tamarta Cadceeda iyo Is-beddelka Saqafka Kala Duwan ee Qarax
Waxaa jiray dhowr dhacdo oo dab ah oo ka dhacday New South Wales usbuucii la soo dhaafay ama wixii la mid ah oo ku lug leh nidaamyada tamarta qorraxda - ugu yaraan labona waxaa loo maleynayaa inay sababeen shidmayaasha kala-goynta dusha sare. Shalay, Dabka iyo Samatabbixinta New South Wales waxay soo warisay inay kaqeyb gashay dhacdo ka dhacday guri ku yaal Woongarrah ...
Mashiinnada ugu habboon ee loo diyaariyey koonkan waa jirka aadanaha. Waxay leedahay nidaam aad ufiican oo isdifaac ah iyo is-hagaajin. Xitaa nidaamkaas aadka u caqliga badan wuxuu u baahan yahay dayactir iyo dayactir marmar ah. Sidaas oo kale nidaam kasta oo dad samee, oo ay ku jiraan rakibidda qoraxda PV. Gudaha qorraxda ...
Qaybaha Nidaamka Korantada ee Ku Shaqeysa
Nidaamka korontada ku shaqeeya ileyska qorraxda oo dhameystiran wuxuu u baahan yahay qaybo ka kooban soosaarka korantada, awoodna ugu beddelaya mid is bedbeddela oo ay isticmaali karaan qalabka guryaha, keydinta korantada xad-dhaafka ah iyo ilaalinta nabadgelyada. Guddiyada Qoraxdu Qaybaha qoraxda waa t ...
Macluumaadkii ugu dambeeyay ee tayada sare leh